Roob Dad Iyo Duunyo-ba lagu Diirsaday Oo ka Hoorey Hargeysa Iyo Nawaaxigeeda
Hargeysa(RH):-Roobab dad iyo duunyo-ba lagu qabowsaday ayaa maanta galinkii dambe ka hoorey Caasimada Somaliland ee hargeysa iyo nawaaxigeeda .
Roobkani oo muddo kooban da’ayay ayaa bulshaweynta magaalada Hargeysi ay aad ugu diirsaddeen.
Maalmihii u danbeeyay waxaa jiray kuleyl, iyo biyo yaraan ka jiray qaar ka mida xaafaddaha magaalada Hargeysa.iyo deegaano kala duwan oo ka mid ah gobolada Somaliland.
Hargeysa(RH):-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo weftigii uu hoggaaminayey ee safarka shaqo ugu maqnaa dalka itoobiya ka dib markii ay marti-qaad rasmi ah ay ka heleen ra’isul wasaaraha dalka itoobiya Abiy Ahmed ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay.
Hargeysa(RH):-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wefti uu hoggaaminayo, ayaa safar shaqo ugu ambo baxay magaalada Addis Ababa, kaddib marti-qaad rasmi ah oo uu ka helay ra’isal wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed.
Maxkamada Sare Ee Jsl Oo Qaraar Ka Soo-Saartey Xeerka Furista Ururada Siyaasada
Hargeysa(RH):-Maxkamada Sare ee Somaliland ayaa maanta qaraar ka soo-saartey murankii ka taagnaa dhaqangalka Xeerka Furista Ururada Siyaasada Somaliland ee Xeer Lr 14.
Maxkamaddu waxa ay ka garnaqday arjiga ku taariikhaysan 02/01/2022 ee ay Maxkamadda usoo gudbiyeen muwaadiniin ka kooban 24 xubnood ujeeddadiisuna tahay dacwad dastuuri ah oo ku saabsan dhaqangelinta Xeer Lr.14/2011 iyo furista ururrada siyaasada Jsl